Pyihtaungsu Hluttaw | Oct 31, 2019
“လူငယ်များအတွက် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေး” ဆောင်းပါး=>
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ၏အပြောအဆိုနှင့်အပြုအမူ ၊ အတွင်းစိတ်နှင့် အပြင်စိတ် တစ်ထပ်တည်းကျသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ ကိစ္စရပ်များ၏ မူလပကတိအတိုင်း ပြုမူပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စရပ်များကို ထိန်ချန်မှုမရှိခြင်း ၊ လိမ်ညာလှည့်ပတ်လှည့်ဖျားမှုမရှိခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ အမှန်ကိုပြောဆိုခြင်း၊ မလိမ်ခြင်း၊ မညာခြင်း၊ မခိုးဝှက်ခြင်းဟုလည်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါသည် ။ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်စွာနေထိုင်ခြင်းသည် လူကောင်းလူမွန်တစ်ယောက်၏ ကြန်အင်လက္ခဏာတစ်ရပ်ပင် ဖြစ် သည် ။ လူသားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရေး၏ အရေးပါလှသော အာမခံသော့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ။ အဆိုပါ "ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း" ဟူသောအရာသည် လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးအား ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရပ်တည်နိုင်စေရန် အကူအညီပေးသော အထောက်အပံ့တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်သော လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ရေရှည်စွာ ဖြစ်တည် တည်တံ့နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် "ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ခြင်း" ကို အထူးလိုအပ်လှပါသည် ။
လူဆိုသောသက်ရှိသတ္တဝါသည် အမှားနှင့်မကင်းနိုင်ပါ ။ နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဘဝနှင့် လေ့လာသင်ယူရခြင်းတို့တွင် အမှားကျူးလွန်မိတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါသည် ။ အကယ်၍ အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်မိပါက ထိုအမှားကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်လော သို့တည်းမဟုတ် ရင်မဆိုင်ဘဲ ရှောင်တိမ်းမည်လော ။ ဤအချက်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ်ကိုင်စွဲထားသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသော ရွေးချယ်မှုပင်ဖြစ်သည် ။ မိမိအမှားကို သတ္တိရှိစွာဖြင့် ဝန်ခံရဲပြီး ထိုအမှားကို မိမိအသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရဲရမည် ။ အမှားကို အကောင်းမြင် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး အမှားတိုင်းကို မိမိ၏အောင်မြင်မှုဘဝပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် အကူအညီပေးသည့် လှေကားထစ်များဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရမည် ။ ထိုအမှား များမှ သင်ခန်းစာယူ၍ မိမိတို့၏ဘဝကို သာယာလှပသော နေ့သစ်များဆီသို့ ပို့ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည် ။ ယခုမှ စတင်၍ သေးငယ်သောကိစ္စလေးများမှအစပြုကာ မိမိကိုယ်တိုင်မှစတင်ပြီး ကြိုးကြိုးစားစား အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်မှသာ "ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း" တည်းဟူသောအကျင့် ကောင်းကို မွေးမြူနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု (Integrity) ဆိုတာဘာလဲ
Integrity သည် လက်တင်စကားလုံး "Integritas" (wholeness) ပြည့်ဝခြင်းမှ ဆင်းသက် လာသည် ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု၏အဓိပ္ပာယ်မှာ "ယုံကြည်ချက်များ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လုပ်ရပ် များသည် တစ်သမတ်တည်းရှိပြီး တန်ဖိုးများနှင့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများကို တောက်လျှောက်ကိုင်စွဲခြင်း" ပင်ဖြစ်ပါသည် ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို ကျင့်ဝတ်နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည် ။ တောက်လျှောက် ကိုင်စွဲထားသောတန်ဖိုးများနှင့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော တန်ဖိုးများဖြစ်သင့် သည် ။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသော တန်ဖိုးအချို့မှာ ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှု နှင့် ယုံကြည်ထိုက်မှု တို့ဖြစ်သည် ။
အထက်အပိုဒ်ပါဖော်ပြချက်အရ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုနှင့် ရိုးသားမှု၏ ဆက်စပ်မှုကို မြင်သာ သိသာနိုင်ပါသည် ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိသူတစ်ဦးသည် ရိုးသားမှုတန်ဖိုးကို မဖြစ်မနေ မြဲမြဲကြီး ကိုင်စွဲထားရန်လိုအပ်လှကြောင်း ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အပြည့်အစုံဆိုရပါလျှင်မူ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ပြုမူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။
နောက်တစ်နည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရပါလျှင် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုသည် "လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကလက်ခံကျင့်သုံးသည့် အဂတိလိုက်စားမှုကိုဟန့်တားသော ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားများ သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော လူ့အမူအကျင့်များ နှင့် လုပ်ဆောင် ချက်များ" ဖြစ်ပါသည် ။
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုချက်အသီးသီးရှိသည့်အနက် လူအများစု သိရှိနားလည်ထားသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ရပ်မှာ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဆိုသည်မှာ "မည်သူ ကမျှ ကြည့်မနေလျှင်တောင်မှ တရားမျှတ မှန်ကန်သည့်အရာကိုပြုလုပ်ခြင်း" ဟူ၍ဖြစ်ပါသည် ။
သို့ပါ၍ "ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဆိုတာဘာလဲ" ဟူသော မေးခွန်းကို ဥပမာအားဖြင့် ဖြေဆိုရ လျှင် "ရိုးဖြောင့်ခြင်း နှင့် မှန်ကန်သောအရာကို မိမိအလေးအနက်ထားသောတန်ဖိုးများ၊ ယုံကြည်မှု များ၊ အခြေခံမူများနှင့်အညီ တစ်သမတ်တည်းဆောင်ရွက်မှုပင်ဖြစ်သည်"ဟုလည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါသည် ။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်တို့နှင့်အတူတကွ မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်တို့မပါဘဲ မွေးဖွားလာ ခဲ့ခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါ ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်ကို မိမိတို့၏ မိသားစုနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှလေ့လာသင်ယူကြရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေများက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုနှင့် ကျင့်ဝတ် နှင့်ညီသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို စိန်ခေါ်နေပါသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရာထူးနေရာ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုအသုံးချ၍ ‌ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သော၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသောလုပ်ရပ်မှ သွေဖည်ဆောင်ရွက်မိခြင်း မှသည် . . . . . မိမိ သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအတွက် မဆီလျော်သောအကျိုးအမြတ်များ ခံစားခွင့် ပေးရန်ဆောင်ရွက်မိခြင်းအထိ . . . . . ဆွဲဆောင်နေပါသည် ။
သို့ပါ၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည် ။
အဂတိလိုက်စားမှုသည် ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဟန့်တားနှောင့်ယှက်၍ လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာမှုကို အားနည်းစေပါသည် ။ သို့ပါ၍ လူတိုင်းသည် တစ်ကိုယ်ရည် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်၍ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုကို တားဆီးကာကွယ်ကြရမည့်တာဝန် ကိုယ်စီရှိကြပါသည် ။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မည်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုကိုမျှလက်မခံသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။ ရည်ရွယ်သည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်က အဂတိလိုက်စားမှုကြာရှည်မတည်ရှိနိုင်သော အခြေ အနေသို့ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဂတိလိုက် စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် တည်ဆောက်ရန်နှင့် ရိုးသား၍ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သော အကျင့်စရိုက်ရှိရန်အတွက် မူလတန်းအရွယ် လူငယ်ဘဝမှစတင်ကာ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေးပညာပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည် ။
လူ့ဘဝ၏ပထမဦးဆုံးသောချိတ်ကို ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဟူသော ဆိုစကားရှိသည်နှင့်အညီ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဖြစ်လာမည့် လူငယ် များ၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရေးအတွက် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကို ပျိုးထောင် ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မူလတန်းအရွယ် ကျောင်းသားလူငယ်များမှစတင်၍ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေးပညာပေးအစီအစဉ် (ဆရာကိုင်) စာအုပ် (G-၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) ကို ဦးစွာ ရေးဆွဲဖော်ထုတ် ခဲ့ပါသည် ။ မူလတန်းအရွယ်ကျောင်းသားလူငယ်များသည် အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်ရွယ်နုနယ်သေး သောကြောင့် အဂတိလိုက်စားခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆ၊ အမြင်သဘောထား ကို နားလည်ရန်မလွယ်သေးပါ ။ သို့ပါ၍အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးသဘောထား သို့မဟုတ် အပြုအမူကို တည်ဆောက်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ၊ တန်ဖိုးထားမှုဆိုင်ရာ ပညာပေး အစီအစဉ် (သီချင်းနှင့် ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတို၊ ကဗျာ၊ ပုံပြင်၊ ပြဇာတ်တို) များကို ပြုစုထည့်သွင်းပေး ခဲ့ပါသည် ။ ယင်းပညာပေးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် လူငယ်များအား ရိုးသားရမည်၊ ဖြောင့်မတ်ရ မည်ဟု နားလည်စေပြီး အမှားအမှန်တွေးခေါ်တတ်စေရန်နှင့် ရိုးသားသန့်ရှင်းသော အခြေခံအပြုအမူ၊ လေးစားမှု၊ မျှတမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ ချစ်ခင်မှု၊ အများအကျိုးဆောင်ရွက်တတ်မှု၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု စသော ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကို လူငယ်ဘဝမှ စတင်ပျိုးထောင်ပေးရန် အားထုတ်ခဲ့ပါသည် ။
ယနေ့လူငယ်တို့၏ပခုံးထက်တွင် ပြည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် နိုင်ငံကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင် လက်ဆင့်ကမ်းထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်များ တည်ရှိနေပါသည် ။ သို့ပါ၍ ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းပြသပေးမှုဖြင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ်တို့သည် ကောင်းမွန် သောကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူမှုတန်ဖိုးများကို နားလည်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရန် အစရှိသောရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် အခြေခံပညာအလယ်တန်း (G-၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉) အတွက် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် (ဆရာကိုင်) စာအုပ်ကို ကော်မရှင်က ထပ်မံရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည် ။ အလယ်တန်း အဆင့်ပညာပေးအစီအစဉ်ကိုမူ တွေးခေါ်မှု၊ သိမြင်နားလည်မှု၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုနှင့် စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင် မှုများကို ပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပြုစုခဲ့ပါသည် ။ ယင်းတွင် ပညာပေးကဏ္ဍကြီး (၅) ခု အတွက် သင်ခန်းစာ ၁၂ ပုဒ်နှင့် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဆိုင်ရာ သီချင်းတစ်ပုဒ်တို့ပါဝင်ပြီး သင်ခန်းစာအချို့ ၏ မျှော်မှန်းရလဒ်၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်ကောက်နုတ်ဖော်ပြရလျှင် . . . . .
လူတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးထားသောအရာများရှိနေပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုရှိသော ကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ယူမှုရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာ တွင်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါလူမှုတန်ဖိုးများက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် (၁) တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု (၂) နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ (၃) အခြားသူများအပေါ်သက်ရောက်မည့်ကိစ္စများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းနှင့် ရိုးသားမှု၊ တာဝန် ယူမှု၊ တရားမျှတမှုအစရှိသော အပြုသဘောတန်ဖိုးများကို ကိုင်စွဲဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း အသိ ပညာပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "လူမှုတန်ဖိုးများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း" ပညာပေး သင်ခန်းစာကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည် ။
အဂတိလိုက်စားခြင်းသည် အများအကျိုးကိုလစ်လျူရှုပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ယွင်းသောအပြုအမူတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် ။ သို့ပါ၍ မိမိတစ်ဦးတည်း၏ကိုယ်ကျိုးကို ဦးစားပေး စဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အများအကျိုးကို ဦးစားပေးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အကျိုးဆက် နှင့်တကွ ခွဲခြားသိမြင်နားလည်စေပြီး၊ သိမြင်ခြင်းအကြောင်းကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍"ကိုယ်ကျိုး နှင့် အများအကျိုးကြား ခွဲခြားတွေးတောခြင်း၊ အခြေခံအတွေးအခေါ်များ" သင်ခန်းစာ (၁) နှင့် (၂) ကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည် ။
ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခြင်းပုံစံများကိုလည်းကောင်း၊ အဂတိလိုက်စားခြင်းအကြောင်းခြင်းရာ နှင့် ဆိုးကျိုးများကိုလည်းကောင်း သိရှိနားလည်စေပြီး အဂတိလိုက်စားမှုပြဿနာအားဖြေရှင်းရန်အတွက် အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲခြင်းမှသည် အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းသို့ ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံသားတို့၏အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းမှသည် ကမ္ဘာကြီးပါပြောင်းလဲခြင်းအထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သိမြင်နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခြင်း နှင့် အဂတိလိုက်စားခြင်း" သင်ခန်းစာများကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ပညာသင်ယူရာတွင် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိရန်အတွက် ပြုမူရန်နှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန် အချက် များကို ပညာပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "ကျောင်းပညာရေးတွင်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု" သင်ခန်းစာကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် အခြေခံအားဖြင့် လူအားလုံးသည် ရိုးသားမှုရှိခြင်း၊ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်တတ်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်နှင့် "လုံလောက်သော စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်" ကို ဘဝနေထိုင်ရေးလမ်းညွှန်ချက် အဖြစ် လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ကြောင်း ပညာပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "လုံလောက်ခြင်း" သင်ခန်းစာကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပျက် ဆောင် ရွက်နေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိဉာဏ်နိုးကြားမှုရှိရန်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုကို လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံးက ဆန့်ကျင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်တိုက်ဖျက်ရန် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပညာပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "အသိဉာဏ်နိုးကြားခြင်း" သင်ခန်းစာကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူ/လူ့အဖွဲ့အစည်းအား တာဝန်ယူမှုရှိခြင်း
လူတိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တာဝန်ယူမှုရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မည်သည့်အပြုအမူများသည် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းဖြစ်သည် ၊ မည်သည့်အပြုအမူများသည် အခြားသူ/လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်တို့ကို သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ လူတိုင်းသည် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပြဿနာများအပေါ် မိမိတာဝန်ကို မိမိတို့ယူခြင်းသာရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် လူ့အဖွဲ့အစည်း သည် ငြိမ်းချမ်းသာယာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိပြီး တာဝန်ယူမှုရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် " ကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူ/လူ့အဖွဲ့အစည်း အား တာဝန်ယူမှုရှိခြင်း" သင်ခန်းစာများကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံသားတို့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ၊ နိုင်ငံ့သားကောင်းပီသစေရန်အတွက် ပြည့်စုံရမည့် အရည်အချင်းများ ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် နိုင်ငံ့သားကောင်းဖြစ်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ယင်းနိုင်ငံ့သားကောင်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ ကျင့်ဝတ်များစသည်တို့ကို သိရှိနားလည် စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ့သားကောင်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများ" သင်ခန်းစာ ကို ပြုစုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ သဘောတူညီချက်၊ ဥပဒေ
အဆိုပါသင်ခန်းစာက စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ သဘောတူညီချက်နှင့် ဥပဒေတို့၏အကြောင်း ကို အခြေခံအားဖြင့်သိရှိပြီး၊ ထိုအရာများသည် လူသားတို့ဘဝ ဘေးကင်းလုံခြုံသာယာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသိမြင်၊ နားလည်၊ လိုက်နာသော နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန် ပညာပေး ထားပါသည် ။
ကျောင်းသားလူငယ်ကဏ္ဍ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြရာ တွင် ဤမျှကာလ၊ ဤမျှအတိုင်းအတာ၊ ဤမျှအခြေအနေဖြင့် ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိနိုင်သေးပါ ။ ဆက်လက်၍ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ များစွာရှိနေပါသေးသည် ။ ဆက်လက်၍လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ။ ထို့ပြင် သင်ခန်းစာများကိုလည်း ကောင်းကျိုးရလဒ် ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် အရည်အသွေးမြှင့်တင်၊ တည်းဖြတ်၊ ဖြည့်စွက်မှုများကို အခြေအနေအချိန်အခါအလျောက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ လူ့ဘဝ၏ပထမဦးဆုံးသောချိတ်မှ နောက်ဆုံးချိတ် တိုင်အောင် ကောင်းစွာချိတ်ဆက်၍ ကောင်းကျိုးသုခအဝဝ ပြည့်စုံကြပါစေ ။
(ဖော်ပြခဲ့သော "ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုမြှင့်တင်ရေး" စာစောင်များကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးကော်မရှင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.accm.gov.mm မှ မည်သူမဆိုရယူနိုင်ပါသည် ။)